Spotify bụ a music gụgharia ọrụ na-enye ohere onye ọrụ iji na-enweta kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ n'ime ngwa na e mepụtara maka otu nzube. Ma, ọ maara na nnọọ ole na ole ọrụ na iji ngwa a onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na egwu na-dị ka ọrụ na-enwe na n'otu ụzọ ahụ dị ka gụgharia music bụ na maka otu ihe nke a mma na-eji site ọrụ on a mmachi ọnụ ọgụgụ. A nkuzi bụ ihe niile banyere ime onye ọrụ ikpughe na mmekọrita songs bulite ka Spotify.
1. Gịnị mere bulite songs on Spotify
2. Olee otú bulite songs on Spotify
Gịnị mere bulite songs on Spotify?
E nwere ọtụtụ ihe na-eme ka n'aka na songs na-uploaded ọrụ na-n'okpuru kwuru na-ụfọdụ n'ime ndị a n'ụzọ zuru ezu iji hụ na onye ọrụ mgbe akwa ụta na mkpebi nke na-ebugote songs on Spotify:
1. The music na e uploaded na ngwa nwekwara ike na-akọrọ ndị ọzọ na Ya mere ikpughe ndị ọrụ na-enwekwu na nke a. E nwere njikọ nke Facebook na Twitter nakwa iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe nwere ileta enyi na-eme ka n'aka na data a napụtara. Dị nnọọ site na-ebugote song na ngwa na-eme ka n'aka na onye ọrụ ahụ mere ọrụ ahụ na ịke na klas na kwa njikọ pụrụ emailed na-song ebudatara na mfe n'ụzọ.
2. Spotify na-ahụ na-elekọta mmadụ media ike weghaara na nke kacha mma n'ụzọ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà music na e uploaded na mpaghara na-akọrọ na àgwà na klas. The Facebook bụ kasị mmadụ mgbasa ozi n'elu ikpo okwu nke ụwa na maka otu ihe ahụ ọ na-esịne ke panel na-nọgidere na-enwe site Spotify ma si otú onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà music nke onwe oke bụ uploaded ma nwee mmasị site n'ikere òkè ya ndị ọzọ.
3. The ike nke music n'ọbá akwụkwọ nke onye ọrụ na-abawanye na maka otu ihe ọzọ songs na-kwukwara na-enweghị ndanda hassle na nke. Nke a na atụmatụ na-enye ohere onye ọrụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ndị na-abụghị naanị ụtọ ma ndị obodo music na-aghọ akụkụ nke Spotify songs na na-depụtara online na otu ọrụ nwekwara ọdabara ka music na ka e dị.
4. Ọ na-emekwa ka n'aka na ọ bụghị nanị na onye ọrụ ma ndị ọzọ so nakwa dị ka ndị enyi na-azọpụta site hassle nke na-achọ ihe ọ bụla akpan akpan track. Ozugbo onye ọrụ na-achọ a track na ọ bụrụ na ọ bụ dị na mpaghara ọ pụrụ uploaded ma na-akọrọ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu iji jide n'aka na ndị ọzọ na-azọpụta site hassle nke na nbudata na akada music na a bụ nsogbu mgbe ụfọdụ.
5. The tracks na-uploaded ngwa ịnọgide enem na bụrụ na nke usoro okuku nke windows echichi ọ bụghị a nnukwu ihe iji na-enweta dum music collection ọzọ site na nbudata na tracks si ngwa. N'ụzọ dị otú a na ọ bụ-ahụ kwuru na ọrụ ga-enwe ike inweta ihe kasị mma atụmatụ na ugbu a na ọ dịghị mkpa na-nchegbu banyere tracks ka ha niile bụ ndị na nke kacha mma aka nke ụlọ ọrụ.
Gbanwee music ụwa
Atụmatụ na e agbakwunyere n'ime Spotify na-ahụ na ọ na-aghọ otu n'ime ndị kasị mma na ndị kasị chọrọ music ọrụ niile ugboro. Ọ na-na-kwuru na ndị ọrụ nwere ike ntị music ke laa na naanị owuwu chọrọ na nke a bụ ifịk njikọ Ịntanetị na ike e mere mfe enweghị ihe ọ bụla hassle. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na e ẹkenam na ụdị ọ bụrụ na Spotify bụ a labeelu nke àgwà, na klas na onye ọrụ obi ụtọ nke dabeere na isi nke functionalities awa site na ụlọ ọrụ na nke a.
Olee otú bulite songs on Spotify?
Iji mee ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ndị na-enwe onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ na-etinyere na otu iji dị ka e kwuru:
1. Onye ọrụ kwesịrị ka nbanye Spotify ngwa:
2. The ụzọ na-a ga-agbaso bụ Dezie> mmasị n'ihu n'ihu na nke a:
3. The Obodo faịlụ nhọrọ bụ mgbe ahụ ka-achọ dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
4. The tinye isi iyi button bụ mgbe ahụ na-pịrị:
5. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na faịlụ na-kwukwara si na windo na-Pop elu site pụta ìhè na oke dị ka kwa ọchịchọ na nke a kwa okokụre usoro na zuru:
> Resource> Music> Olee bulite Music ka Spotify ma ọ bụ Tinye Songs ka Spotify